Barruu Sochii Fakkeessuu
Barruu isa wanta fakkasaa keessa jiru qofa, kunis rogarfeewwan, sararoota, ykn wantoota barruu sochii fakkeessuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, rogarfee tokko fakkasiitii, kana booda rogarficha irra lama-cuqaasiitii barruu kee galchi.
Wanta fakkasaa isa barruu warra sochii fakkeessuu ati barbaaddu of keessaa qabu fili.
Dhangi'i - Wanta - Amaloota Barruu filadhuutii, kana booda caancacla Barruu Sochii Fakkeessuu cuqaasi.
Saanduqa Galtee keessaa, sochii fakkeessaa isa barbaaddu fili.
Amaloota galtee qindeessiitii, OK cuqaasi.
This page is: /text/swriter/guide/text_animation.xhp
Title is: Barruu Sochii Fakkeessuu